Ku dhawaad 100 Ruux oo Muhaajiriin ah, ayaa lagu la’yahay Badda Mediterranean-ka
Home WARARKA Ku dhawaad 100 Ruux oo Muhaajiriin ah, ayaa lagu la’yahay Badda Mediterranean-ka
Mediterranean(Berberanews):- Ku dhawaad 100 Ruux oo Muhaajiriin ah, ayaa lagu la’yahay Badda Mediterranean-ka ee u dhexaysa waddamada Talyaaniga iyo Liibiya, ka ddib markii Doonnidii sidday ay ku degtay meel ka baxsan Xeebaha Liibiya.
Ciidammada ilaalada Xeebaha Talyaaniga oo haatan wada baadigoobka lagu raadinayo Dadkaasi, ayaa sheegay in ay biyaha badda ka soo heleen 8 Meyd halka 4 Ruuxna ay iyagoo nool badbaadiyeen.
Hase-yeeshee, Tobannaan Qof oo kale, ayaa weli la rumaysan yahay in ay Badda ku jiraan. Doonta ayaa ku degtay inta u dhaxeysa Liibiya iyo Talyaaniga, halkaas oo 50km u jirta Xeebta Waddanka Liibiya.
Markab dagaal oo uu Faransiisku leeyahay, laba Doonyood oo Ganacsi iyo Taageero dhanka Hawada ah, ayaa lagu fulinayaa hawsha baadigoobka. Ma cadda dalalka ay u kala dhasheen Tahriibayaasha ay la degtay Doonnidii ay saarnaayeen.
Tirada Muhaajiriinta u Safarta Yurub, ayaa hoos u dhacday tan iyo markii ay bilaabantay dhibaatada Muhaajiriinta dabayaaqadii 2015-kii. Hase-yeeshee in dadku ay ka tallaabaan Badda ayaa weli ah mid dad badan ay adeegsadaan oo khatar badan leh.
Jimcihii, ayey Ciidammada ilaalada Xeebaha Talyaanigu badbaadiyeen ku dhawaad 550 Muhaajiriin ah oo ku Safrayay Badda Mediterranean-ka ee Talyaaniga iyo Liibiya u dhaxaysa.
Previous article“Silaanyo waa dambiile Qaran “Xildh Qabile
Next articleMadaxweyne Silaanyo oo Wasaaradda Caddaalada ka qaaday maamulkii iyo miisaaniyadii Maxkamadaha